NFC-da iPhone XS, XS Max iyo XR waxyar baa furan | Wararka IPhone
Si tartiib tartiib ah ayaan u sii wadeynaa warka ah in taleefannada cusub ee Apple ay keenayaan oo bilaabi kara in la xajiyo Jimcaha, Sebtember 14, iyo kuwa ka mid ah kuwa ugu caansan wararka, mid aad iska indho tiri karto oo aad muhiim u ah waa kan aad shalay ayuu noo sheegay Apple on NFC iyo iPhone XS, XS Max iyo XR.
Moodooyinka cusub ee Apple uma baahna codsiyo ay ku aqriyaan astaamaha NFC, taas oo macnaheedu yahay inaanan mar dambe u baahan doonin codsiyada shaqadan iyo si fudud oo leh shaashadda firfircoon ee qalabkeenna (shuruudaha lagama maarmaanka u ah inay shaqeyso) akhristaha wuxuu ka shaqeyn doonaa asalka si uu u awoodo inuu akhriyo calaamado kasta, wuxuu sidoo kale u hoggaansamayaa qawaaniinta amniga ee adag ee horeyba aan u shaqeyn doonin markaan haysanno codsiyo gaar ah.
Ma shaqeyn doonto inta aan kamaradda, qaabka diyaaradda ama Apple Pay (Wallet) firfircoon nahay
Waana in Apple ay doonayaan inay daaweeyaan caafimaadkooda ayna ilaaliyaan xogta muhiimka ah ee ku kaydsan iPhone-ka, sidaa darteed waxay si cad u maleeyeen in codsiyada qaarkood NFC aysan ka shaqeyn doonin asalka. Xaddidaadahaani waa: la Shandad firfircoon, markaan haysanno iPhone-ka oo furan markii dib loo bilaabo, marka NFC-ga Core uu firfircoon yahay, kamaradda ama si toos ah markaan u haysanno iPhone qaabka diyaaradda., oo u baahday isdhexgalka Aqoonsiga Face si uu uga shaqeeyo kiisaska oo dhan.
fursadaha cusub ee soo-saareyaasha ayaa ah inay hadda awoodi doonaan ku abuuri xiriiriyeyaal khaas ah calaamadaha. Sidan oo kale, qaar ka mid ah shaqooyinka iPhone-ka ayaa la furay oo laga yaabo inay xiiso leeyihiin si ay u fududaato ka shaqeynta barnaamijyada sida Mail ama Safari. Sikastaba xaalku waanu kaaga tagaynaa adiga fiidiyow yar oo Apple ay u leedahay horumariyeyaasha markaa waad arki kartaa faahfaahinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » NFC-da iPhone XS, XS Max iyo XR waxyar baa furan
Apple waxay ku qasbeysaa horumariyayaashu inay abuuraan barnaamijyo la jaan qaadaya barnaamijyada iyo qalabka cusub